ईटहरी । सुनसरीको ईटहरीस्थित पुर्वलाईनमा रहेको टयाङग्रा पुल जहाँ पुगेपछि एकपटक सबै सवारीधनीहरुले आ–आफनो भगवान सम्झिन बाध्य हुन्छन । करिब १० सेकेण्डमा पार गरिने पुल पार गर्न सवारीधनीहरुलाई ३ मिनेटदेखि १० मिनेट सम्म जाममा बसेर धुलोमा पुरिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । जिर्ण अबस्थाको पुल, ठुला सवारी साधनदेखि रिक्सा सम्म र पैदलयात्री समेत त्यहि साँघुरो...
८१ बर्षकाे उमेरमा पद्मासन कसेर ८० फिट पोखरी वारपार (तस्विर तथा भिडियाे सहित)
उमेरले ८१ बर्ष पुगेका रामचन्द्र अधिकारीले योगाभ्यासको पद्मासनमा वसेर पौडी पोखरीमा मजाले वारपार गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित पारेका छन । सुनसरीको इटहरीस्थित ओसियन पार्कमा रहेको पौडी पोखरीको ८० फिट लामो पोखरीमा अधिकारीले मज्जाले पद्मासनमा बसेर वारपार गर्न सफल भएका छन । ८० फिट अर्थात २५ मिटर लामो दुरी रहेको पोखरीको एकछेउबाट पद्मासनमा बसेर उत्तानो परेर हाम...
मोरङ / मोरङको बयरबन ९ का १३ बर्षीय बालक दिपेश लिम्बुको सपना पढेर डाक्टर बन्ने अनि गरिब र दुखीको निशुल्क उपचार गर्ने रहेछ । उनको सपना भनेको नै त्यही हो । उनले आफु ५ बर्षको हुँदा गरिबिका कारण उपचार नपाउँदा आफ्नी आमा गुमाउनु पर्दाको पिडा आफु बुझने भएपछि उनले यसरी सम्हालेका रहेछन । सानैमा मातृयिबोग...
झापा / इलाका स्वास्थ्य चौकी राजगढमा हेल्थ असिस्टेण्ड (पाँचौ)सहित ८ जनाको दरवन्दी छ । वर्थिङ सेन्टरसमेत सञ्चालनमा रहेको सो स्वास्थ्य चौकमा दरवन्दी भएपनि विद्यार्थीले विरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन भन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर, स्वास्थ्य चौकी राजगढको वास्तविकता यही हो । दरवन्दीमा रहेका चिकित्सकले काम नगर्दा सो स्वास्थ्य चौकीमा लाइफलाइन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दमकमा अध्ययनरत...
झापा । झापाको कनकाई नगरपालिका – १ निवासी भरतमणि भट्टराईले नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोख्रेलले आफूलाई निर्घात कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन् । बाटो फराकिलो पार्ने भन्दै आफ्नो नम्वरी जग्गामा ग्राभेल गर्न गिटी थुपारेपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै मेयर पोखरेलको घरमा जानकारी गराउन पुग्दा पोखरेलले कुटपिट गरेको भट्टराईको आरोप छ । मेयरको कुटाइका कारण आफ्नो नाथ्री फुटेको...
धरानको प्रिय मधुप्यालाको मधुशाला (तस्विरहरू सहित)
धरान । धरानेहरुका प्रिय मधुदाई अर्थात मधु शाक्यलाई बिहानीको मिर्मिरे उज्यालो नहुँदै राष्ट्रिय दैनिक तथा स्थानीय पत्रपत्रिका बटुल्न र पसल खोल्न हतारो हुन्छ । भुँईमा उज्यालो नखस्दै उनको मधुशालामा चिया खानेहरुको लाईन लागिसकेको हुन्छ । उनको पसल अगाडी पत्रिका नपढी र चियाको चुस्की नलिई धेरैलाई चित्तै बुझदैन । मधुदाईको यो कर्म नियमित नै हो, उ...
कहिले सम्म चुप बस्ने साङला बेच्ने गोरखा किचेन ֍
ईटहरी । आफुलाई पुर्बाञ्चलको पहिलो र ठुलो दाबी गर्ने गोरखा डिपार्टमेण्ट स्टोरको किचनमा खाना खाने क्रममा पटक पटक ग्राहकहरुले साङला सहित अखाद्य बस्तुहरु भेटिँदा र पटक पटक ब्यबस्थापनलाई जानकारी गराउँदा समेत सम्बन्धित पक्ष मौन बस्नुले आफनो गल्ति ढाकछोप गर्ने रणनीति अपनाएको प्रष्ट देखिएको छ । सुनसरीको ईटहरी, मोरङको बिराटचौक, पथरी झापाको दमक र सुनसरीकै धरानमा...
केही दिनअघि पुर्बेली न्युजमा जनताले आशा र भरोसा गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरुका पछिल्ला हर्कतका बारेमा लेखिएको एउटा लेखलाई लिएर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले पित पत्रकारिता गरेको आरोप लगाए । अधिकांश समय सेल्फी खिच्ने र पुराण देखि श्राद्ध सम्ममा प्रसादी ग्रहण गरेरै समय बिताउने जनप्रतिनिधिका केही उदाहरण सहित लेखिएको लेखमा उनीहरुले जनताप्रति गरिएको बेईमानीलाइृ प्रष्टयाईएको थियो । सोही लेख...
बिर्तामोड । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरुङ्गाको निर्माणाधीन भवन गुणस्तरहिन रहेकाे पाइएको छ । पाँच करोड ५२ लाख ५८ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ ८७ पैसाको लागतमा दी कञ्चनजंघा र कञ्चनजंघा जेभी काठमाडौंले भवन निर्माण सुरु गरेका थिए । नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामले ६ करोड ९३...
उदयपुर / उदयपुरमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको पाईएको छ । उदयपुरमा शनिबार विहान विना पासका ८ वटा सरकारी कार्यालयका सवारी साधन ट्राफिक प्रहरी उदयपुरले नियन्त्रणमा लिएका थिए । नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरु घर जान, आफन्त भेटघाट, घुमघाम, गाडी सर्भिसिङ्ग, अनुगमन तथा फिल्डको काम भन्दै सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग भएको...
झापा, चैत ३ । मान्छेलाई आफ्नो ज्यानभन्दा प्यारो के हुन सक्छ ? तर, इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले बिर्तामोडका सुन व्यापारी साजन मुखियाले व्यक्तिगत सुरक्षा नअपनाएकै कारण ज्यान गुमाएको बताएका छन् । हत्यामा संलग्न व्यक्तिले ‘हन्ड्रेट पर्सेन्ट अल्कोहल’ र ‘क्लोरोफम’ नामक औषधि प्रयोग गरेर साजनको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायव...
नयाँ मन्त्रीमण्डलमा गोकर्ण र लालबाबुकै आश !
शुक्रबार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा नयाँ मन्त्री र राजयमन्त्रीहरु थपिएका छन । ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री थप्दै सरकार विस्तार गरेका हुन । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेबाट ६ मन्त्री बनेका छन् भने माओवादीका पाँच मन्त्री बनेका छन् । चार राज्यमन्त्री पनि नियुक्त भएका छन् । यससँगै ओली सरकार २२ सदस्यीय बनेको छ ।...
झापा, चैत २ । बिर्तामोडमा सञ्चालित केही ठूला होटलले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको पाइएको छ । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र होटल व्यवसायी संघ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले बुधबार र विहीवार दुई दिन गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण...
यस्ता छन प्रदेश १ को सरकारको हनिमुन कार्यक्रम !
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफनो सय दिने हनिमुन कार्यक्रम अन्र्तगत प्रदेशमा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सरकार र प्रदेशसभा प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन । प्रदेश सरकारको सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले गर्दै चुस्त एवम् प्रभावकारी रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न र नागरिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम...
सहकारीको ९४ लाख हिनामिना गर्ने ४ जना जेल चलान
बेलबारी / मोरङको सुन्दरहरैचा ९ मा रहेको पानस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सर्बसाधारण वाट सकलन गरीएको रकम हिना मिना गरेको आरोपमा थुनामा परेको मध्ये ४ जना पुपक्षयका लागी जेल चलान भएका छन । अध्यक्ष सहित ५ जना थुनामा परको थिए । अध्यक्ष देबेन्द्र मास्के भने १५ लाख धरौटीमा छुटेका छन । ९४ लाख रकम...
बेलबारीको लाखौ बजेट भेडेटारमा स्वाहा !
बेलबारी । स्थानीय स्तरमै तालिम र गोष्ठी गर्ने प्रशस्त भवन र हलहरु हँुदाहुँदै बेलबारी नगरपालिकाले तालिम र गोष्ठीका नाममा जनप्रतिनिधिहरुलाई धनकुटाको भेडेटार पुर्याएर लाखौको रकम स्वाहा बनाएको छ । नगरपालिकाको आयोजनामा धनकुटाको भेडेटारमा आईतबार र सोमबार २ दिने “जीवन रुपान्तरण कार्यशाला” आयोजना गरी नगरका सबै प्रतिनिधिहरुलाई भेडेटार पुर्याएर लाखौको अनाबश्यक खर्च गरेको छ । कार्यशालामा...
मालपोत र नापीमा कर्मचारी र बिचौलिया चिन्नै गाह्रो
बेलबारी । मोरङको बेलबारीमा रहेको मालपोत र नापी कार्यलयमा को कर्मचारी र को बिचौलिया भन्ने चिन्नका लागी सेवाग्राहीहरुलाई समस्या हुने गरेको छ । कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीहरु हरेक पटक झुक्किन्छन । कर्मचारी बस्ने कुर्सीमा ५ जना जति बिचौलिया झुम्मिएका हुन्छन । फाईल पल्टाउने देखि हस्ताक्षर गर्ने सम्मका काम कस्ले गर्छ त्यो सेवाग्राहीहरुलाई पत्तो नै हुँदैन...
बेलबारी । भाग्यशाली (चिठठा ) लट्री परेको भन्दै बिभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी ठगी गर्ने गिरोह मध्येका २ जनालाई इलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा बेलबारी १ की प्रतिमा भुजेल र झापाको बाह्दशी गाँउपालिका ६ का भोलाराज भुजेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बेलबारीको मालपोत चौक बाट...
धुलोमा नपुरियोस, लालबाबुको सपना !
सामान्य मानिसहरुलाई ख्याल समेत नुहुने सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका बेला लालबाबु पण्डितले आशातित काम गरेर जनताको मन जिते । डिभि र पिआरवाला सरकारी कर्मचारीहरुले उनलाई धारे हात लगाएपनि सर्बसाधारण जनताले भने उनको गुनगान मज्जाले गाए र अहिले सम्म उनको कामको प्रशंषा हुन छोडेको छैन । लालबाबुले देश र बिदेशमा रहेका लाखौ मानिसको मन जित्न सफल...
धुर्मुस सुन्तली रबि र कुलमानलाई मन्त्री बनाए हुन्न ֍
देशमा राम्रो काम गर्ने मनिसहरुको ठुलो खाँचो छ । देशमा इमान्दारिता देखाउने र काम गर्ने मानिसहरु खोज्ने हो भने औलामा गन्न सकिन्छ । चहाने हो भने देश बनाउन गाहे छैन । देशका लागी प्राण आहुति गर्ने मानिसहरुको कमी भएको पनि होईन । धेरै शहिदहरुले देशको लागी रगत बगाएका छन र बलिदानी दिएका छन । जहाँनिय...
भोट दिने लाई राहत वितरण गराउदै जनप्रतिनिधि
इनरुवा । सुनसरीमा बाढी पीडित लाई राहत वितरणमा जनप्रतिनिधिहरुले भेदभाव गरेको पाइएको छ । वास्तविक बाढी पीडितको नाममा आएको राहत उनीहरू लाई वितरण नगरिए आफूलाई चुनावमा भोट दिनेहरू लाई वितरण गर्न लगाइएको पाइएको हो । सुनसरीमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले कतिपयै स्थानमा जनप्रतिनिधिसंग सम्पर्क नगरी आफूखुशी वितरण गरेको जनप्रतिनिधिहरु प्रतिक्रिया दिएका छन् । गणतन्त्र चीनको सहयोगमा...
सरकारलाई विप्लव चुनौति, के गर्छ अब सरकार ֍
विप्लव माओवादीको युवा संघले बिराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी पूर्वराज्यमन्त्री पदम राई लगायतलाई गिरफ्तार गरेपछि माओबादीले मंगलबार नेपाल बन्द आयोजना गर्यो । जसको प्रभाव देशब्यापी रुपमै परेका छ । ठाँउठाँउमा बिस्फोट भए भने धेरै ठाँउमा बन्दको त्रास छायो । आफ्नो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसैको विरोधमा मंगलबार विप्लव माओवादीले...
के राधानगरको पेट्रोल खानी फेरी सञ्चालनमा आउला ֍
बेलबारी । चीनले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषणको तयारी थालेसँगै मोरङको राधानगरमा रहेको पेट्रोल खानी फेरी सञ्चालनमा आउला भन्ने धेरैको चासोको बिषय बनेको छ । अघिल्लो पटक केपी ओली सरकारमा भएकै बेला देशका बिभिन्न ठाँउमा चिनियाँ टोलीले अन्बेषण गरेको थियो । मार्चमा चिनियाँ विज्ञको टोली नेपाल आउने तय भएसँगै बाहुनीमा रहेको पेट्रोल खानीको समेत चर्चा...
एकल महिलाको गाँसबास खोस्ने उपमेयरको अर्डर नमान्दा प्रहरी नै असुरक्षित (अडियो प्रमाणसहित )
पथरी । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने प्रहरी स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट असुरक्षित बन्न थालेका छन । स्थानिय सरकार गठन भएको एक बर्ष पनि पुग्न नपाउदै मोरङ पथरीशनिश्चरेकी उपमेयर यमुना बास्तोला (बिष्ट) बाट प्रहरी असुरक्षित बन्न थालेको खुलेको छ । पटक पटक आलोचित हुँदै आएकी उपमेयर बिरुद्घ जनताको गुनासोको चाङ नै लागेको छ । जनता न्यायलयमा जाँदा निरास...
प्रदेश सरकार चलाउन धौ धौ, मुलुकले थाम्ला त संघियता ֍
इटहरी । मुलुक संघीयतामा गईसकेको छ । तीनै तहको निर्बाच्न समेत सम्पन्न भईसकेको छ । ७ वटै प्रदेशमा सरकार समेत बन्ने तयारीमा रहेको छ । यहि बिचमा सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा सुविधा र तलबमान तोकेर सातै प्रदेशमा पठाईसकेको अबस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारीको तलबमान तोकेर पठाईसकेको छ ।...
मोरङ । सबैभन्दा समृद्ध मानिएको प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र ३ जना मन्त्रहिरु चयन भईसकेका छन । अस्थायी राजधानी तोकिएको बिराटनगरमा अस्थायी राजधानी तोकिएपछि चहलपहल बढनु स्वभाविक नै हो तरपनि निर्बाचितहरु सबै फुर्सदिला देखिएका छन । किनकी अब के गर्ने भन्ने बिषय नै टुंगो नलागेका कारण उनीहरु फुर्सदिला भएका छन...
झापा, फागुन ३ । बिगतमा दाताहरुले विभिन्न प्रयोजनका लागि निःशुल्क प्रदान गरेको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । दान दिएको जग्गाको दुरुपयोग हुँदा समेत जिम्मेवार निकाय मौन बस्दा समाजमा दानशीलताको खडेरी पर्ने खतरा बढेर गएको छ । झापाका विद्यालय तथा धार्मिक मठमन्दिरलाई दाताहरुले तिनीहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदान गरेको जग्गा अतिक्रमण भइरहँदा त्यसको संरक्षणका लागि...
मोरङ । पेन्सिलले घोचेको निहुँमा कसैको ज्यान जान सक्छ ब भन्दा पत्यार लाग्दैन तर मोरङमा पेन्सिलले घोचेकै निहुँमा एक वालकको ज्यान गएको छ । त्यसैगरी जिस्कने क्रममा पेन्सिलले घोचेेेर अर्को ठाउँमा एक जना बिरामी परेका छन् । घटना माघ १९ गते घुक्रबारको हो । मोरङ बेलबारी २ स्थित जेभियर स्कुलको कक्षा १ मा पढ्नेहरू केटाकेटीहरु...
सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै रक्सीको चुस्की ! (तस्विरहरू सहित)
झापा, माघ २७। सरकारी श्रोत र साधनको दुरुपयोग भए÷नभएको नियमन गर्ने निकाय हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय । तर, नियमन गर्ने निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीले नै सरकारी श्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे भने अरुको अनुगमन कसले गरिदिने ? यस्तै देखियो शनिवार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका एक अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी खेमराज ओझा, शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमार...
पूर्वेली फलाेअप : सञ्चालक समितिकै मिलेमतोमा सहकारीको ९१ लाख हिनामिना
बेलबारी । मोरङको सुन्दरहरैचा ९ मा रहेको पानस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सर्बसाधारणको ९१ लाख बढी रकम हिनामिना भएपछि संस्थाकै ब्यत्तिहरुको उजुरीका आधारमा ब्यबस्थापक सहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । सर्बसाधारणको लाखौ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा संस्थाका ब्यबस्थापक बिमला राई सहितलाई नियन्त्रणमा लिई संस्थाको खाता समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको...
इटहरी । सुनसरीको इटहरीमा भएको बलात्कार काण्डको बिषयलाई लिएर यतिबेला सिंगो सुनसरी मात्र नभएर देशकै ध्यान त्यतातिर मोडिएको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परेर जनप्रतिनिधि र केही पत्रकारहरु समेतले लेनदेन गरी घटना सामसुम बनाएको भन्ने हल्ला समेत बाहिर आएको छ । यहि घटनालाई लिएर नेकपा एमाले,माओबादी केन्द्रले संयुत्त बिज्ञप्ती जारी गरेका छन भने नेपाल पत्रकार महासंघ,क्रान्तिकारी...
मेयर साहेबहरु सेवक कि शासक ֍
स्थानीय निर्बाचनपछि जनअपेक्षाअनुसार काम हुने र सहज हुने आशामा बसेका स्थानीय बासिन्दाहरु यतिबेला निराश बन्न थालेका छन । आफैले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढदै गएको छ । जनप्रतिनिधिलाई नै समेत यतिबेला काम गर्न असहज अबस्था छ । उनीहरु समेत यतिबेला आफना प्रमुख प्रति सन्तुष्ट छैनन । बिभिन्न गाँउपालिका,नगरपालिका,उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा मेयर अर्थात प्रमुखको हेपाहा...
बहुमुखी प्रतिभाका धनी बेलबारीका सर्जक श्याम गौतम कहाँ के गर्दैछन ֍
बेलबारी । गायक,संगीतकार,कलाकार तथा मुर्तिकार श्याम गौतम यतिबेला धनुकुटाको राजारानीमा बसेर मुर्तिकला तथा सामाजिक कार्यमा क्रियाशिल रहेका छन । बिभिन्न बस्तुको आकार जस्ताको त्यस्तै निर्माण गर्न सक्ने खुबी भएका उनी मनोबिज्ञान दर्शन र योगाभ्यास शिक्षकका रुपमा समेत परिचित रहेका छन । गायन,साहित्य लेखन,हास्यब्यङ्ग तथा बिभीन्न चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्न समेत खप्पिस उनी केही बर्षयता धनकुटाको राजारानीमा...
साङला बेच्ने गोरखा किचेनलाई कस्ले दियो हरियो स्टीकर ֍
मोरङ । तपाई गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरद्धारा सञ्चालित किचेनमा खाना खाँदै हुनुहुन्छ होस गर्नुस,खाना संग संगै साङलो खानु होला । इटहरीमा रहेको गोरखा किचेनमा बाराम्बार खानामा साङला भेटिन थालेपछि पुर्बेली न्युजले प्रमाणसहित बुधबार समाचार प्रकाशन गरेपछि गोरखाका अन्य शाखामा समेत त्यस्तै भईरहेको प्रमाणसहित हाम्रा पाठकहरुले हामीलाई फोटो र भिडियो उपलब्ध गराएका छन । मोरङको पथरीमा रहेको...
ईटहरी । आफुलाई पुर्बाञ्चलको ठुलो दाबी गर्ने गोरखा डिपार्टमेण्ट स्टोरको किचनमा खाना खाने क्रममा एक ग्राहकले साङला भेट्टाएका छन । नेपाल सरकारको आधिकारीक निकायले आफुलाई शुद्ध खाना खुवाउने किचनको रुपमा हरियो स्टीकर उपलब्ध गराएको बताउने स्टोरले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको खानामा साङला भेटिएपछि गोरखा किचनको खाना शुद्ध नभएको स्पष्ट देखिएको छ । ती ग्राहकले यसअघि पनि...
बिराटनगर, ईटहरी र धरानका मेयर किन बने आलोचित ֍
मोरङ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिहिरु निर्बाचित भएपछि जनतामा एक किसिमको आशाको किरण छायो । उनीहरुको अपेक्षा पनि बढयो । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहिन भएको स्थानीय निकायको निर्बाचन र सिंहदरबार गाँउमा नै आउने भएपछि जनताको आशा बढनु स्वभाविक पनि हो । तर पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर १ का सबैभन्दा ठुला मानिएका महानगर र उपमहानगर मध्ये सुनसरीको ईटहरी,धरान...
बिराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको कार्यशैली एकपक्षीय र निरंकुश बन्दै गएपछि महानगरपालिका भित्र भाडभैलो सुरु भएको छ । कांग्रेस समर्थक केही वडाअध्यक्षहरुले मेयर पराजुलीको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टी जनाउदै वोर्ड वैठक समेत बहिस्कार गर्ने धम्की दिएका छन । ७ महिने कार्यकाल वित्न नपाउदै मेयर पराजुली विवादमा मुछिएका छन । अवको दिनमा उनलाई काम गर्न...
सुनसरी । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका मेयर तारा सुब्बा झण्डै ६९ लाखको गाडी खरिद गर्ने टेण्डर स्वीकृत गराएपछि फेरी विवादमा मुछिएका छन । भुमाफियाको तर्फबाट सम्मान थापेर विवादमा परेका उनी दोस्रो पटक एमाले नेता पत्नीलाई विनाप्रतिष्पर्धा जागिर लगाएर विवादमा तानिएका थिए । तेस्रोपटक मेयर सुब्बा फेरी बिवादमा तानिएपछि धरानमा हंगामा मच्चिएको छ । उपमहानगरपालिका सँग अहिले...
अधुरै रह्याे समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने सपना...
संखुवासभा / जीप दुर्घटनासंगै गाउँपालिका अध्यक्षको सपना अरुणको बगरमा समाप्त भएको छ । समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको सपना बगरमा परिणत भएको हो । मकालु गाउँपालिकालाई जिल्लाकै नमुना स्थानिय तह निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर गत असार १४ गतेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा होमिएका कटुवाल नेकपा एमालेबाट विजयी भएका थिए । उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी रहेका...
उर्लाबारी, ३० पौष / न्यू भिजन एकाडेमी स्कूलमा कार्यरत कर्मचारीलाई बलाकारको प्रयास गर्ने प्रिन्सीपल अजित भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । उर्लाबारी–८ स्थित उक्त बिद्यालयको हाताभित्रै कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गर्ने प्रिन्सीपल भट्टराईलाई कार्वाहीको प्रक्रिया ल्याउनुको साटो विद्यालय हाताभित्रै मिलापत्र गरी उन्मुक्ति दिएको हो । शुक्रबार विहान बिद्यालयमा काम छ भन्दै ती कर्मचारीलाई प्रिन्सीपल भट्टराईले विद्यालय बोलाएका...